प्रकाशित 09 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो तौल घट्नु. यो संग 58 टिप्पणिहरु.
58 प्रतिक्रिया टिप्पणिहरु
Mog Arten09 / 21 / 2018 मा 4: 11 बजे
मलाई मन पर्छ कि मोटो जल र पाचनको लागि विभिन्न औषधिहरू छन्। प्रयोगकर्ताहरूको इन्सुलिन प्रतिरोध र ग्ल्यामेमेइक नियन्त्रण बनाउन अधिक शक्तिशाली उनीहरूको शारीरिक परिवर्तनको लागि उत्कृष्ट छ। म उत्सुक छु कि भएमा यदि रोगीलाई निर्भर रहनु पर्छ र यी औषधीहरूमा जीवनको लागि रहन आवश्यक छ। म दीर्घकालीन प्रभावहरूमा अध्ययन हेर्न चाहन्छु।
माइल दुबर्जर09 / 21 / 2018 मा 4: 02 बजे
वजन घटाने खुराकहरू जस्तै समय समयमा सुधार गर्न र विकसित गर्न जस्तो लाग्छ। मलाई रुचि राख्नुपर्दछ यदि विभिन्न श्रेणियों बाट उल्लिखित कुनै पनि औषधि मिश्रण सँग कुनै सुरक्षा आवश्यकताहरू छन्। यस लेख साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
imah09 / 21 / 2018 मा 10: 38 ए.सी.
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा थाहा पाउनु पर्दछ। मलाई लाग्छ कि मानिसहरू वास्तवमा यी आवश्यकता पर्छन्, तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुपर्छ। म निश्चित छ कि यो जादू जस्तो काम गर्नेछ।
wumi09 / 21 / 2018 मा 10: 30 ए.सी.
त्यहाँ बजारमा धेरै वजन घटाने आपूर्तिकर्ताहरू छन्। ईमानदार हुन, म धेरै संग पहिले कुरा गरें र AASraw सहयोग को निर्माण को लायक छ, मलाई लाग््छ।
डियन मैक्सवेल09 / 21 / 2018 मा 9: 05 ए.सी.
वाह, यो सूची एकदम ठूलो छ। मलाई लाग्छ म अब जान्छ कि किस प्रकार को वजन घटाने पूरक को आवश्यकता हो मलाई। मलाई पनि थाहा थिएन कि प्रकार्य / उद्देश्य अनुसार विभिन्न प्रकारका छन्। धन्यवाद।
क्यारोलिन वार्नर09 / 21 / 2018 मा 8: 58 ए.सी.
मैले वजन घटाने पूरक पछि "जादू" मा साँच्चै विश्वास गरेन। तर मैले परिवर्तन गरेको बेला मैले परिवर्तन गरे! मलाई लाग्छ कि यो सूचीमा सर्वश्रेष्ठ छ।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 21 / 2018 मा 3: 26 ए.सी.
नमस्ते किट्टी, यदि तपाई कुनै पनि वजन घटाउने पाउडर चाहानुहुन्छ भने तपाईले हाम्रा आवश्यकताहरू हाम्रो आधिकारिक ईमेल (king@aasraw.com) लाई पठाउन सक्नुहुन्छ। प्रिस्क्रिप्शनको लागि वा काउन्टर माथि, यो निर्भर गर्दछ। म तपाईंलाई लिन मद्दत गर्न सक्दो कोसिस गर्दछु, तर तपाईको डाक्टरलाई पेशेवर सुझावहरूको लागि सोध्नु राम्रो हुन्छ।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 21 / 2018 मा 3: 14 ए.सी.
हो, हाम्रो धेरै ग्राहकहरूले वजन घटाने पाउडरको अर्डर गरेको छ .हामीले राम्रो काम गर्दछ र उनीहरुलाई माया गर्छन। स्वास्थ्य चिन्ताको लागि, यो निर्भर गर्दछ, हरेक ड्रगमा साइड इफेक्टहरू छ। त्यसैले यो तपाईंको डाक्टर सुझावहरूमा खुल्ला औषधि लिन आवश्यक छ।
स्टेफनी कामौ09 / 21 / 2018 मा 12: 02 ए.सी.
त्यहाँ बजारमा धेरै वजन घटाएका पाउडरहरू छन् र एक विश्वसनीय एक फेला पार्ने काम गर्दछ जुन ठूलो चुनौती हो। मलाई मान्छेहरु को लागी जो कुनै पनि परिवर्तन को बिना लगभग सबै वजन घटाने को खुराक को कोशिश को छ। म काम गर्ने अनुमान गर्दछु कुनै पनि नुस्खा दबाइहरु लिएर गर्नु भन्दा पहिले नै हानिकारक बोसो को लागि पहिलो विकल्प हुनुपर्छ।
कप्तान यू09 / 20 / 2018 मा 10: 28 बजे
म यो मात्र लाग्न सक्छु किनकि म कब्जेर बाहिर जान चाहन्छु। म मेरो प्रणाली सफा गर्न सक्छु र कवेल आलोचनामा सहज चाल गर्न सक्दछ।
मच09 / 20 / 2018 मा 9: 25 बजे
वजन घटाने संधै एक समस्या भएको छ सबैलाई राम्रो लाग्न चाहन्छ। मलाई लाग्छ कि यी प्रवृतिहरूले कहिल्यै पनि छोड्नेछैनन्। हेरविचार गर्दै रहेको छ कि हरेक समय राम्रो सन्देश देखेको सन्देश। त्यसैले म अनुमान गर्दछु कि मलाई यो वजन घटाने पाउडर वा मोटो हानि गोलहरू को उपयोग गर्न को लागी अझ राम्रो लागी हेर्न को लागी आवश्यक छ
ब्राडली लैवेंडर09 / 20 / 2018 मा 3: 45 बजे
मोटापाको उपचार र शारीरिक क्रियाहरू सुधार गर्न विशेष गरी क्लेबर्ब्रोलल र सालबुटोमोल आवाज। कुल मिलाएर, जस्तै पूरकहरूले तपाईंलाई स्वस्थ बनाउनको लागि अत्यधिक प्रभावकारी र ट्राफिकेट्ट लाग्दछ।
कर्ट रन्चर09 / 20 / 2018 मा 3: 40 बजे
म स्त्री माथि माथिको रूपमा फिट हुन चाहन्छु! मलाई माया छ कि यो पूरक चिकित्सकीय पेशेवरहरु द्वारा निर्धारित गरिएको छ जसले यसको सर्वोच्चताको लागि छुट्याउन सक्छ। मोटे रोगीहरूसँग निष्कर्षहरू विशेष रूपमा प्रभावशाली थिए। बाडेको मा धन्यवाद!
बियानका लिली09 / 20 / 2018 मा 5: 56 ए.सी.
मलाई थाहा छैन कि वजन घटाने को पूरक विभिन्न वर्गीकरणहरु छन्। मैले सोचेका थिए कि तिनीहरू सबैलाई अनावश्यक बोसो जलाइदिनु जरुरी छ! बाडेको मा धन्यवाद!
बर्नी विनचेस्टर09 / 20 / 2018 मा 5: 54 ए.सी.
वाह, वजन घटाने साँच्चै 1800 हरूमा जान्छ? मलाई कुनै पनि पूरक बारेमा कुनै विचार छैन र म वजन कम गर्ने प्रयास गर्दैछु, यस सूचनात्मक लेखको लागि धन्यबाद!
नोरा09 / 20 / 2018 मा 4: 49 ए.सी.
यस सूचीको लागि धन्यबाद! कसरी बिस्तारै छुट्टाछुट्टै छुट्याउन र कसरी शरीरको मोटो, हान्ने तरिकाबाट छुटकारा पाउन को लागी धेरै नयाँ चीजहरू।
nikki09 / 20 / 2018 मा 2: 12 ए.सी.
म यी सबै वोसो हानि पूरकको प्रयोग सिफारिस गर्दछु यो साल परीक्षणको लागी चलेको छ र यसलाई सुरक्षित र कार्ययोग्य प्रमाणित गरिएको छ। ती वजन घटाने पाउडर तपाईंको शरीर बोसो बर्नर हुन सक्छ, वजन घटाने को लागि तरल आहार, म अधिक हानि ब्ल्मी मोटाइको लागि यस तरिकालाई मनपर्छ। हामी यो काम गर्नमा भरोसा गर्न सक्छौं।
बल09 / 20 / 2018 मा 2: 04 ए.सी.
प्रमाणपत्रिकाले अर्को राम्रो पूरक हो कि फ्याट लडाईहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। म यो वास्तवमा लामो समयसम्म राम्रो हुनेछ जब शारीरिक चिसो आराम संग अवशोषित गरिन्छ।
फैनी09 / 19 / 2018 मा 10: 47 बजे
म ब्लड प्रेशर भएकाहरुको लागि लोरसेरिन सिफारिस गर्दछु र यो विशाल भोजका लागि वास्तवमै राम्रो हुन्छ। यसले भूखलाई रोक्न र मेटाबोलिजमको गति बढाउन मद्दत गर्दछ।
प्रेम गर्दछ09 / 19 / 2018 मा 10: 37 बजे
Olistat मेरो लागि राम्रो हुनेछ, यो बजार मा सबै आहार गोली को रूप मा बेचे। मलाई त्यो प्रयास गर्न आवश्यक छ। किनकि यसले खानाबाट बोसो अवशोषित गर्न मद्दत गर्नेछ। म पाचन बढाउने बर्नर मनपर्छ।
सिडनी मोरेनो09 / 19 / 2018 मा 9: 53 बजे
Orlistat वजन खोने को लागि एक उत्कृष्ट विकल्प जस्तो लाग््छ, मैले यस प्रकारको उपचारको बारेमा कहिल्यै सुनेको छु तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरू धेरै उपयोगी छन् र कसरत र स्वस्थ खाना बानीहरूसँग धेरै मान्छेहरूको लागि उपयोगी हुनेछ।
कर्ट09 / 19 / 2018 मा 9: 21 बजे
के कुनै पनि ती वजन कम ड्रग्स प्रयोग गर्न सक्छ? मेरा मतलब छ कि मैले पहिलो विचार गर्नुपर्ने कुनै स्वास्थ्य चिन्ता छ? मलाई लाग्छ कि जानकारी यहाँ महत्त्वपूर्ण छ तर समग्रमा राम्रो पोस्ट।
किट्टी परीड09 / 19 / 2018 मा 8: 53 बजे
यो अहिले सबै ठाउँ उपलब्ध छ? प्रिस्क्रिप्ट वा काउन्टर माथि? मसँग विस्तृत विवरण यहाँ छ। वैसे पनि, कम से कम औषधि चश्मे सबै यहाँ छन्।
Chatton09 / 19 / 2018 मा 8: 34 बजे
मलाई थाहा छ कि वजन घटाने पाउडर त्यो शक्तिशाली हो। मलाई लाग्छ कि ती खुट्टाहरू लिँदा तपाईंलाई अझै नियमित व्यायाम चाहिन्छ। तैपनि मैले ब्लग पढ्न पाएको छु!
राए09 / 19 / 2018 मा 8: 28 बजे
म कसरी पेट फाटी छिटो हानिकारक संग छुट छु। केही उत्पादनहरू जुन म जान्दछु स्केचिकेन्ट हो त्यसैले मैले लेबल पढ्छु। जानकारीपूर्ण लेखको लागि धन्यवाद! यसले साँच्चै मलाई कसरी वजन घटाने जान्न जान्न मद्दत गर्दछ
Landen Burrows09 / 19 / 2018 मा 3: 17 बजे
Cetilistat र Clenbuterol यौगिकहरू तिनीहरू कसरी शरीर को प्रवाह को प्रभावित गर्दछ मा दिलचस्प छ। Cetilistat, यो शरीर को लागि राम्रो पाचन प्रणाली हो, क्लेन तपाईंको शरीर लाई वसा जलने मा मदद गर्न सक्छ। म रोगीहरूलाई यी वोसो हानि पूरक अनुरोध गर्न सक्दिन, उनीहरूको लागि भान्सा क्लिनिक साबित अध्ययनहरू छन्।
मोजर टोरानर09 / 19 / 2018 मा 1: 53 बजे
यो अविश्वसनीय निष्कर्षहरू छन्! रक्तचापमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै र ग्ल्यामेमेसी नियन्त्रण बढाउन बहुमूल्य असरहरू पूरक फेला पार्न सकिन्छ। वजन घटाने कसरत, कसरत योजनाहरू, आहार प्लानहरू, आदि यी गर्मी विषयहरू हुन् र म यसलाई माया गर्छु, मलाई लाग्छ कि यो मेरो वजन घटाने योजना सुरु गर्न यो धेरै सहयोगी छ। बाडेको मा धन्यवाद!
जस्टिन डी09 / 19 / 2018 मा 10: 41 ए.सी.
मैले वजन घटानेको खुराक कहिल्यै गरेनन, र मैले आफैले नजिकको भविष्यमा यो प्रयास गरिरहेको छैन। म सामान्यतया गम्भीर आहारमा जान्छु, क्यालोरी गणना र क्यालोरी घाटा गर्छु र जिममा धेरै गाह्रो हुन्छ। वजन घटाने, प्राप्त भयो।
मार्को एंटोनियो09 / 19 / 2018 मा 10: 39 ए.सी.
म वजन घटाने को खुराक को कोशिश मा आश्वस्त भएको छ, तर यो लेख कुनै तरिकाले यो वास्तवमा कसरि काम गर्दछ कसरी एक सिंहावलोकन दिनुभयो, र कसरी यो छ। त्यहाँ त्यहाँ धेरै औषधीहरू बाहिर छन्, कि तपाईं साँच्चै निर्णय गर्न तपाईं को लागि राम्रो काम गर्दछ। डाक्टर परामर्श सम्भवतया राम्रो सुरू हुन सक्छ।
Charmaine Bush09 / 19 / 2018 मा 9: 06 ए.सी.
Orlistat ले मेरो लागि जादू काम गरे। म विश्वास गर्छु कि वजन घटाने एक्लै लागूपदार्थको बारेमा सबै होइन। हामी यसलाई शारीरिक गतिविधि र स्वस्थ / संतुलित आहारसँग मिलाउन सक्दछौं जुन वास्तवमा हामीले चाहने परिणामहरू देख्न सक्छौं।
जोनाथन गॉर्डन09 / 19 / 2018 मा 9: 03 ए.सी.
वाह, यी ड्रगहरू सबै भन्दा ठूलो छन्। अहिले2वर्षको लागि वजन गुमाउने प्रयास गरिसकेपछि, र अहिले सम्म म निर्दोष नतिजाहरु देख्दैछु। शायद यो समय हो म वजन घटाने को खुराक लेने को कोशिश।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 19 / 2018 मा 5: 46 ए.सी.
नमस्ते मित्र, कुनै चिन्ता छैन। हरेक दबाइले साइड इफेक्टहरू जस्तै हामीलाई थाहा छ। तर यो निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई सही ढंगले लिनुभयो भने तपाईले वजन घटाने पाउडरबाट थप फाइदा पाउनुहुनेछ र यो राम्रोसँग खेलकुद संग सम्बन्धित हुनेछ। केहि ग्राहकहरु ले हामिलाई केहि sibutramine पाउडर र lorcaserin पाउडर को आदेश दिए छ, उनि भन्यो कि यो राम्रो काम हो र उनि धेरै प्यार हो।
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक09 / 19 / 2018 मा 5: 37 ए.सी.
तपाईंको समीक्षाहरूको लागि धन्यबाद। प्रत्येक ड्रगमा साइड इफेक्टहरू छन्। यो भर पर्छ। तर मलाई लाग््छ कि लोरस्सेसर पाउडर र orlistat पाउडर हाम्रो ग्राहकहरु को अनुभव को अनुसार तपाईंको लागि राम्रो विचार हो। विशेष गरी लोरस्सिनको लागी यो बीबीसीले भर्खरै रिपोर्ट गरेको छ र यसको कम साइड इफेक्ट छ।https://www.bbc.com/news/health-45319393
पास्कल09 / 19 / 2018 मा 3: 21 ए.सी.
मलाई लाग्दैन कि यो वजन घटाउने पूरक सेवनहरू लिँदा कुनै पनि हानिकारक हुन्छ। किनकि एफडीए र जापानले यसलाई समर्थन गरेको छ। यी कुनै पनि पूरकहरू तौल घटाउनका लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ, किनभने उनीहरूले बोसो छिटो गुमाउँदैछन्। प्लस वजन घटाउने आहार योजना, तपाईं आफ्नो बोसो छिटो जलाउन सक्नुहुन्छ।
स्वत:09 / 19 / 2018 मा 3: 11 ए.सी.
यो राम्रो थियो वजन घटाने को खुराक को प्रदर्शन को लागि तपाईं। मैले हानिकारक फोरम वजनमा यो प्रश्नहरू पढ्न र उचित जवाफहरू मात्र दिइन्छ। म आशा गर्दछु कि ती साँच्चै यो जानकारी आवश्यक छ यो हेर्न।
लिसा नतालियन09 / 19 / 2018 मा 12: 58 ए.सी.
म खाने र पिउने माया गर्छु, त्यसैले वजन गुमाउनु सधैं मेरो लागि एक चिन्ता हो। यदि यो पूरक आहारमा जान नसक्नु मेरो शरीरको हेरचाह गर्न सक्षम छ भने, यो यो लेख पत्ता लगाउन सक्ने कुरा हो। धन्यवाद!
डेभीड टेजो09 / 18 / 2018 मा 10: 21 बजे
मैले वजन घटानेको खुराक कहिल्यै गरेनन, र मैले आफैले नजिकको भविष्यमा यो प्रयास गरिरहेको छैन। म सामान्यतया गम्भीर आहारमा जान्छु, क्यालोरी गणना र क्यालोरी घाटा गर्छु र जिममा धेरै गाह्रो हुन्छ। वजन घटाने, प्राप्त भयो। तर मैले देखेको केही मोटाइ मान्छेहरू, तिनीहरूका लागि वजन कम गर्न गाह्रो छ, किनकी केवल फिटनेसमा निर्भर रहन्छ र क्यालोरीको सेन्सर नियन्त्रण गर्न तिनीहरूले वजन चाहन सक्दैनन्। शायद वजन घटाने ट्याबलेटहरूले तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ।
एलेक्स Summers09 / 18 / 2018 मा 8: 45 बजे
सबै सोफे आलुले यो औषधिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र हेर्नुहोस् कि उनीहरूले कति तनाव बिना वजन कम गर्न सक्छन् विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि व्यायाम। पुरुषहरूको लागि आहार योजना बनाउनुहोस्, तिनीहरूलाई स्वस्थ आहार खाने सुझाव दिनुहोस्, स्वस्थ खाना खाऔं। खानेकुराको मात्रामा कम वजन घटाने चिसोको हावा होईन
स्कट Summers09 / 18 / 2018 मा 8: 26 बजे
मैले मेरो डाक्टरलाई सोध्नु पर्छ यदि यो मेरो लिन सुरक्षित छ भने। के यो अहिले पनि उपलब्ध छ? इमान्दार हुनको लागि, मैले सिबुट्रामिन र अर्लिस्ट्याट पाउडरको बारेमा मेरो साथीबाट केहि थाहा पाएँ। म अनुमान गर्छु कि मैले अझ बढी सिक्नु पर्छ त्यसपछि केही गर्नुहोस्।
Moz Chesk09 / 18 / 2018 मा 3: 07 बजे
म खुसी छु कि तपाईं यी पूरकहरू सुरक्षित गर्न र सुरक्षित प्रयोग गर्न ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुनेछ। सिब्युटेरिन पाउडर र लोर्सेसरिन पाउडर जस्तै भूख suppressants लगाउँछन् कि उनीहरूले दिमाग र शरीर कसरी व्यवहार गर्छन्। मैले यी औषधीहरूलाई मानिसहरूको जीवनशैलीको आधारमा प्रभावकारी असर देख्न सक्थेँ जुन सबै अनुसन्धानले तिनीहरूलाई क्रेडिट गर्न सक्छ।
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 मा 3: 00 बजे
यो राम्रो छ यी सबै क्लिनिक रूपमा वजन कम गर्न सिद्ध भएको छ। यो अचम्म छ कि कतिपयहरूले Orlistat र Synephrine जस्तै पाचन र वसा जलने काम गर्दछ। बाडेको मा धन्यवाद!
कुटान09 / 18 / 2018 मा 10: 50 ए.सी.
यसका लागी एक अर्काको अनुहारमा अनुहार र अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहार झल्किन्छ। मलाई सहयोग गर?
मार्क पी09 / 18 / 2018 मा 10: 46 ए.सी.
यसले वास्तवमा जीवन बचाउन सक्छ, म निश्चित रूपले मेरो परिवार र साथीहरूलाई यस बारे चिन्ता गर्नेछु। मेरो मतलब हामी यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि जो केहि हो हामी वजन घटाने पाउडर ले रहे हो हाम्रो स्वास्थ्य को कुनै पनि हानि को कारण हुनेछ।
चार्लेन जी09 / 18 / 2018 मा 10: 43 ए.सी.
मैले गम्भीर मात्रामा लिएका छन् तर मेरो लागि केहि पनि काम गरेन। र तिनीहरूमध्ये केहिले वास्तवमा खराब साइड इफेक्टहरू गरे। यो राम्रो छ कि यस लेखले यस पूरकको सन्दर्भमा एकदम राम्ररी जानकारी देखाउँछ। म आशा गर्दछु कि म केहि वजन घटाने को पाउडर को कोशिश गर्न को लागि पनि केहि साइड इफेक्ट देखि बचें। कुनै सल्लाह छ?
फैटीटी प्याटी09 / 18 / 2018 मा 9: 37 ए.सी.
Orlistat पाउडर द्वारा ट्याब्लेटमा थियो। कुनै पनि फैटी खाने, पनीर वा केएफसी खाँदैन! मैले पेट दुखाइको साथ समाप्त पार्छु र तपाईलाई थाहा छ। हाहाहा
अमिल-लियोनेयर09 / 18 / 2018 मा 9: 33 ए.सी.
Orlistat पाउडरसँग वजन घटानेमा राम्रो असरहरू छन् र मलाई थाहा थियो कि कसैलाई थाहा थियो।
उफान09 / 18 / 2018 मा 8: 46 ए.सी.
मलाई Lorcaserin एचसीएल पाउडर को बाहिर प्रयास गर्नु पर्छ किनकी यो चयापचय को लागि धेरै राम्रो छ र खाना को लागि आग्रह को पनि दबा सकते हो। खानाको साथमा सधैं मेरो सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ।
शान्ति09 / 18 / 2018 मा 8: 39 ए.सी.
यो पोस्ट वास्तवमा मेरो लागि छ किनकि मलाई अहिले लामो समय गुमाउने प्रयास गर्ने छ। यो पोष्ट साँच्चै समयमै प्रयोग हुन्छ बोसो जल प्रयोगको लागि उत्तम पूरकहरू छनौट हुनेछ। त्यसपछि मैले सोधेँ कि कसको वजन घटाएर पाउडर र उनीहरूको नजिकको भविष्यमा किन्न सक्छ। यो साँच्चिकै एक सुन्दर पोस्ट।
कैरी09 / 18 / 2018 मा 5: 17 ए.सी.
वजन कम गर्नु अघि मैले अल्झिएको छु। यद्यपि, मलाई अनुमान छ कि योमा खराब प्रभाव छ त्यसैले म यसलाई रोक्न। म अझै पनि वजन घटाने पाउडर पूरक बारेमा हानिकारक हुँ।
लौरा09 / 18 / 2018 मा 4: 27 ए.सी.
मैले पहिले धेरै वजन घटाउने पूरकहरूको प्रयास गरेको छु तर दुर्भाग्यवस तिनीहरू वास्तवमै मेरो लागि काम गर्दैनन्। यो धेरै जानकारीपूर्ण लेख को लागी धन्यवाद। अहिलेको रूपमा, म मेरो शरीरलाई जस्तो मन पराउँछु।
AJ09 / 18 / 2018 मा 1: 40 ए.सी.
म धेरै आश्चर्यचकित छु कि बजार मा वजन घटाने पूरक पाउडर बाहिर धेरै छन्। मेरो वर्तमान जीवनशैलीको छनौट को पूरै गर्न एक दिन को बारे मा सोचने को बारे मा सोच रहयो। यद्यपि, यो जस्तो देखिन्छ कि मलाई काउन्टरबाट एक किन्न पनि खरीद गर्न केवल विशेष प्रिन्ट्स चाहिन्छ? अथवा त्यहाँ केही औषधीहरू छन् जुन म नुहाउने कुनै पनि आवश्यकता बिना प्राप्त गर्न सक्दिनँ?
Priteh Vishwakarma09 / 18 / 2018 मा 12: 47 ए.सी.
वजन घटाने पाउडर जरूरी सबैको लागि राम्रो नहुन सक्छ। मानिसहरू वजन घटानेमा केही पोषक तत्वहरूलाई एलर्जीन पाउडरहरू प्राकृतिक खुराकहरूको खोजी गर्नुपर्दछ।
चोकर09 / 17 / 2018 मा 11: 40 बजे
संसारको सबैभन्दा राम्रो वजन घटाने पूरकको एक विस्तृत विवरण। म खुराकहरू मनपर्छ किनभने सधैं प्रभावकारी हुन्छन् विशेष गरी औषधि नियन्त्रण र राम्रो व्यायाम दिनचर्या पनि थपिएका छन् .सबै भविष्यका सन्दर्भमा यो पृष्ठलाई चिन्ह लगाइयो।
Bassy09 / 17 / 2018 मा 11: 34 बजे
यो मेरो लागि एक उत्कृष्ट पोस्ट हो, म एक वजन घटाने यात्रा मा हूँ र म हाई स्कूल पछि देखि मेरो वजन संग संघर्ष भएको छ। सिब्युट्रमिन एचसीएल (मरिदिया) सीएएस.टट जाँच गर्न पछाडि हेर्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ यो
वास्तवमा आवश्यकता हुनेछ।
विक्रम पर्मर09 / 17 / 2018 मा 10: 57 बजे
त्यहाँ धेरै औषधीहरू छन् जसले वजन गुमाउन मद्दत गर्दछ। यी ड्रगहरू धेरै प्रभावकारी हुन्छन्।
Jiffy Rando09 / 17 / 2018 मा 9: 37 बजे
मेड्स + workouts र बेशक उचित खाने मेरो हात वजन घटाने मा छ। यद्यपि मैले अहिले यसलाई रोकिदिएँ तर केही थोरै चिसो राख्न। सम्भवत: जब म मेरो दिनचर्यामा फर्कनेछु म यो प्रयोग गर्नेछु।
Erza Scarlet09 / 17 / 2018 मा 9: 23 बजे
कसैले कसरी औषधिको बारेमा कुरा गर्दैन? म सधैं यहाँ शारीरिक पक्ष वा यस विषयको सन्दर्भमा खेल्न पोषण पक्षको तर यो पहिलो तालिका हो कि मेडमा हो। हुनसक्छ तर अझै पनि। 2
जेनिस09 / 17 / 2018 मा 10: 38 ए.सी.
म वजन कम गर्न कोसिस गर्दै छु कि म धेरै आशिष् छु कि म यस लेख मा आयो कि एक उपयुक्त वजन घटाने पूरक को चयन को आसपास यस्तो विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ। यसले मलाई केही ठोस जानकारी प्रदान गर्दछ जुन मैले मेरो लागि उत्तम विकल्प बनाउन सक्छु। धन्यवाद!